SAMOTALIS: Madal Aan Nooceeda Hore Loo Arag Oo Ilyartu Is Qabsatay Oo Beelweynta Arab Sheekh Isaxaaq Shirweynahii Is Afgarad 2 Ku Qabatay Magaalada London Iyo Siyaasiyiin Magac Iyo Miisaanleh Oo ka Soo Qayb Gallay Daawo Sawirada
Madal Aan Nooceeda Hore Loo Arag Oo Ilyartu Is Qabsatay Oo Beelweynta Arab Sheekh Isaxaaq Shirweynahii Is Afgarad 2 Ku Qabatay Magaalada London Iyo Siyaasiyiin Magac Iyo Miisaanleh Oo ka Soo Qayb Gallay Daawo Sawirada
London (Halbeegnews)–07/05/2013--Waxaa maalintii shalay si rasmi loo soo gebogebeeyey shirweynihii beesha Arab ee AFGARAD II oo maalintii Sabtida iyo Axadda oo bishu kala ahayd 4tii May iyo 5tiiMay ka dhacay waqooyi galbeed ee magaalada London.
Shirweynahaasayaa waxa ka soo qayb galay ergooyin ka kala socday waddamada Yurub WaqooyigaAmeerika iyo Carabaha iyo ergooyin ka kala socda dhammaan gobolada CarrigaIngiriiska.
Shirweynhanayaa daba socday shirweyne hore loogu qabtaya waddanka Sweden oo loogu magac daray Afgarad I kaasoo ayka soo baxeen go?aamo lagu ansixiyey shirweynahan lagu qabtay London.
Shirarkanis-daba jooga ahaa Afgarad I iyo Afgarad II ayaa gogol xaadh u ah shirweyneguud oo la qorshaynayo in lagu qabto waddanka gudihiisa bisha August 2013
Shirweynahanayaa loo agaasimay si casriyeysan oo la mid ah sida shirarka caalamka loo qabtoiyadoo labada maalmood loo kala qaybiyey maalin 1aad oo warbixino ay lagadhageystay ergooyinka dibadaha ka yimi, warbixino iyo xogo laga soo diraywaddanka oo la dhageystay, su?aalo doodo iyo talooyin iyo tusaalayn. Maalinta2aad ee shirka ayaa waxa dadka shirka ka soo qaybgalay loo
kalaqaybiyey shan kulan-hawleed (workshops) oo ay fikradahooda ka soo dhiibtaan.
Shirkanayaa madasha ku kulimyey dad badan oo ku kala duwan xagga afkaaraha siyaasadda kanakala tirsan xisbiyo iyo ururo siyaasadeed.
Go?aamadii shirka lagu gaadhay ayaa sidau qornaa:
Beeshuwaxay soo dhaweynaysaa wada hadallada haatan u bilowday dowladda iyo XAQSOORtaasoo aanu ku rajo weynahay in dowladdu xaggeeda dedaal badan gelin doonto sidiilooga midho dhalin lahaa wadahaladaas maadaama ay dowladdu tahay ta mindadadaabkeeda haysa.
Waxaanuku wergalinaynaa dowladda in go?aamadii xagga siyaasadda ee ku aaddanaaxaaladda siyaasadeed ee la soo gudboonaanatay beesha ee ay ahayd in laga soosaaro shirweynahan beesha labada maalmood uga socday magaalada London ee carriga Ingiriiska in la islagartay haatan in dib loo dhigo si fursad loo siiyo wadahalada fool-ka-foolka ahee dowladda iyo XAQSOOR u bilowday.
In siwadajir ah looga wada shaqeeyo nabadgelyada guud iyo ilaalinta qaranimadajamhuuriyadda Somaliland.
Waxaybeeshu sidoo kale ugu baaqaynaa taageerayaasha kale ee XAQSOOR in ay sidoo kalefursad siiyaan wadahaladaas bilowday.
1. In laga shaqeeyo horumarinta deegaamada ay beeshu degto iyadoo la fulinayo
2. mashaariicdalagu soo qaaday shirka ee la isku af gartay.
3. In Laxoojiyo xidhiidhka Qurbojoogta iyo Ururka dhaliyaradda ee dalka kadhisan G16
4. In beeshu isugu timaado gudo iyo dibadba shirweyne ka dhici doona bisha August gudaha dalka.
Hoos Ka Daawo Muuqaaladdii Madasha Shirweynaha Afgarad II